अग्लो पहाडमा भव्य रिसोर्ट, सभा सम्मेलनको प्रख्यात गन्तव्य – BikashNews
काठमाडौं । हरियाली र मनमोहक जंगल । चराचुरिङ्गीहरुको चिरविर–चिरविर आवाज । न कुनै कोलाहल नत मानिसहरुको चिच्याहट । फुस्फुस उड्दै आउने कुहिरोको शीतल स्पर्श । छिनमै पानी । छिनमै पारिलो घाम । यस्तै मौसममा मस्त देखिन्छन् चन्द्रागिरी घुम्न आएका पर्यटक ।
यही मौसम र विशेषताका कारण चन्द्रागिरी घुम्न आउने मानिसहरुको घुइँचो लाग्छ । चन्द्रागिरीबाट देखिने काठमाडौं उपत्यकाको मनोरम दृश्य । सगरमाथा, अन्नपूर्ण, लाङ्टाङ, गौरिशङ्कर र मनास्लु लगायतका हिमश्रृंखलामा देखिने सेताम्य हिउँ । चन्द्रागिरीबाट बिहानै देखिने सूर्योदय र साँझ अस्ताउँदै गरेको सूर्य हेर्दा मान्छेलाई लाग्दो हो, यो पो त स्वर्ग ।
काठमाडौंको धुलो धुवाँ, फोहोर, ट्राफिक जाम, कोलाहल, मानसिक तनाव र एकोहोरो काम लगायतले निराशा मान्छेहरु चन्द्रागिरी पुगेपछि अलग्गै संसारकाे अनुभूति गर्दछन् । सिँगो काठमाडौँ उपत्यकालाई चन्द्रागिरीको टुप्पोबाट नियाल्न पाउनु, चन्द्रागिरीको स्वच्छ हावा स्प्वनसँगै ‘पोज–पोज’का तस्वीरहरु खिचाउनु अनि चन्द्रागिरी हिमाल पुगेर भालेश्वर मन्दिरको पूजा गर्न पाउनु सायद मान्छेहरु यहाँ पुगेपछि आफूलाई भाग्यमानी ठान्छन् होला ।
कोही आफन्त र साथीभाइहरुसँग गफिँदैछन् । कोही तस्वीर खिचाउनमै व्यस्त छन् । कोही चन्द्रागिरी टाप्पुबाट रमणीय दृश्यावलोकनमा केन्द्रित छन् । काेही जेठकाे गर्मी छलेरे चन्द्रागिरीकाे चिसो सिरेटोमाथि रमाउँदै चिसो बियर चुस्किरहेका भेटिन्छन् ।
चन्द्रागिरीमा रिसोर्ट खुलेपछि त झन स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । विगतमा बिहान चन्द्रागिरी पुगेर साँझ घर फर्किने कयौं पर्यटकहरुको त्यहीँ बास बस्ने चाहना ‘चन्द्रागिरी हिल्स रिसोर्ट’ले पूरा गरेको छ ।
भारतको असामबाट काठमाडौं घुम्न आएको एक परिवार अघिल्लो साता चन्द्रागिरीमै भेटियो । दुई छोरा श्रीमान श्रीमतीसहित काठमाडौं घुम्न आएको उनको परिवारलाई असामकै एक जनाले चन्द्रागिरी पुग्न सुझाव दिएका रहेछन् ।
‘मेरो साथी पनि पहिले यहीँ आएको रहेछ, उसैले भनेर म यहाँ (चन्द्रागिरी) आएँ, म यहाँ नआएको भए पश्चाताप हुुन्थ्यो होला, मलाई चन्द्रागिरी स्वर्ग जस्तै लाग्यो, काठमाडौंमा त्यस्तो कोलाहल छ, तर यहाँ आहा ! क्या शान्त’ पवन नाम गरेका भारतीय नागरिकले खुसी हुँदै भने ।
चन्द्रागिरी रिसोर्टले चन्द्रागिरीको महत्व झनै बढाएको छ । घना जंगलको बीचमा रहेको रिसोर्टमा बस्नुको अनुभति बेग्लै किसिमको छ । रिसोर्टका म्यानेजर सन्तोष कुवँर मानिसहरुको रिफ्रेस बन्ने गन्तब्य चन्द्रागिरी हिल्स रिसोर्ट बन्दै गएको बताउँछन् ।
‘९० प्रतिशत नेपाली नै रिसोर्टमा आउनुहुन्छ, जति आउनुहुन्छ उहाँहरु चन्द्रागिरीको अत्याधिक प्रशंसा गर्नुहुन्छ, मलाई लाग्छ कि हामी यहाँ काम गर्नेहरु यहाँको वातावरणकै कारण पाँच वर्ष बढी बाँँच्छौं होला,’ उनले आफ्नो अनुभुति सुनाउँदै भने ।
चन्द्रागिरीमा हिउँ परेको बेला रिसोर्टमा थेगिनसक्नु मानिसकाे चाप हुन्छ । अहिले पनि रिसोर्ट भरिभराउ भएकाे उनले बताए ।
‘यहाँ न साउण्ड पोलुसन छ, यो वातावरणमा काम गर्दा स्वर्गमा काम गरेको महसुस हुन्छ, ‘उनी थप्छन्,‘मान्छेले एक पटक रिफ्रेस गर्न चाहन्छु, तनावमुक्त हुन्छु भन्ने लाग्छ भने चन्द्रागिरी अति उत्तम गन्तव्य हो ।’
दिउसो मात्रै होइन चन्द्रागिरीबाट काठमाडौं उपत्यकाको रातिको दृश्य पनि साँच्चिकै सुन्दर लाग्छ । बत्तिले झलमल्ल काठमाडौं, सिरिरि.. हावा । वाऊ ! साँच्चिकै सुन्दर काठमाडौं देख्न मन छ भने एक पटक राति चन्द्रागिरी पुग्नै पर्छ ।
सुन्दर ठाउँसँगै चन्द्रागिरी रिसोर्टको आतिथ्यता पनि गज्जवको छ । चन्द्रागिरी हिल्स रिसोर्टमा काम गर्ने सबै नेपाली नै छन् । विदेशीसँगै नेपाली वास्तविक स्वाद चन्द्रागिरीमा भेटिन्छ । रेष्टुरेन्टका म्यानेजर प्रकाश शाहका अनुसार चन्द्रागिरी पुग्ने हरेकले रिसोर्टमा पाक्ने पिरो आलु असाध्यै मन पराउँछन् ।
‘हुन त हामीले विदेशी र स्वदेशी परिकारहरु बनाउँछौं, सबैले सबै परिकार मन पराउनु हुनछ तर, पछिल्लो समय धेरैले पिरो आलु नै रोज्नु हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो मेनु नै विशेष छ ।’
सभा सम्मेलनको गन्तव्य
विगतमा काठमाडौं उपत्यकाबाट कतै टाढा कुनै कार्यक्रम गर्नु पर्यो भने मानिसहरुले नगरकोट, गोदावरी, धुलिखेल रोज्थे । कम्पनीको साधारणसभा, कुनै सभा सम्मेलन तथा विवाह नै किन नहोस् धेरैले रोज्नै भनेको यिनै दुई/तीन ठाउँ मात्रै हुन् ।
तर, अहिले अधिकांशको रोजाइ चन्द्रागिरी हिल्स रिसोर्ट बनेको छ । कुनै दिनमा त रिसोर्टमा कार्यक्रम आयोजनाका लागि ठाउँ नै हुँदैन । मारवाडीहरुको मात्रै होइन नेपालीहरुको विवाह गर्ने राम्रो गन्तव्य पनि चन्द्रागिरी नै बनेको छ ।
‘हरेक दिनमा कुनै न कुनै सभा सम्मेलन तथा ठूलो कार्यक्रम भइरहेको हुन्छ, उहाँहरु यहाँ आएपछि अर्को कार्यक्रम पनि यतै गर्ने सुनाएर जानुहुन्छ, अरुलाई पनि चन्द्रागिरीमा कार्यक्रम गर्न सुझाव दिनु हुन्छ,’ जति आउनुहुन्छ सबैले रिसोर्टको प्रशंसा गरेर नै जानुहुन्छ,’ म्यानेजर कुँवरले भने ।
चन्द्रागिरी हिल्स रिसोर्टमा तीन वटा हलहरु छन् । हलहरुको नाम पनि नेपालको हिमश्रृङ्खलाको नामबाट राखिएको छ । सगरमाथा, गणेश, मनास्लु, शिवपुरी लगायतको नामबाट हलको नामाकरण गरिएको छ ।
रिसोर्टमा सफा सुग्घर पौडी खेल्न सक्ने सुविधा पनि छ । रिसोर्ट नजिकै जिपलाइन, चिल्ड्रेन पार्क लगायतका मनोरञ्जनात्मक खेलहरुले पनि चन्द्रागिरीको गरिमा बढाएको छ । त्यससँगै रिसोर्टमा हेलिप्याडको पनि सुविधा छ भने पर्यटकलाई ल्याउन र पुर्याउनका लागि केबलकारसम्म निःशुल्क दुई वटा हाइसको सुविधा छ ।
चन्द्रागिरी हिल्स रिसोर्टमा सय वटा कोठा छन् । रिसोर्टमा ६२ वटा डिलक्स, एक्जुकेटिभ ३० वटा, स्विट ६ वटा र २ वटा प्रेसिडेन्ट कोठाहरु छन् ।
म्यानेजर कुवँरका अनुसार न्यूनतम १२ हजारदेखि ३०/३५ हजार रूपैयाँ पर्छ । उनले एउटा प्रेसिडेन्ट रुमको नै एक रातको बसाइ शुल्क ३५ हजार रुपैयाँ पर्ने बताए ।
‘रिसोर्टमा एक रात बस्न चाहने हो भने न्यूनतम १६ हजार खर्च हुन्छ, त्यसमा दुई जनाको डिनर र बिहान खाजा र दुई वटा केबलकारको टिकट पाइन्छ, तीन जना बस्न चाहेमा ४ हजार थप गर्नु पर्छ,’ उनले भने ।
हाल रिसोर्टमा दैनिक २ सय जना ग्राहक आउने गरेको र रिसोर्टका कोठाहरु अधिकांश प्याक नै हुने उनले बताए ।
यस्तै, रेष्टुरेन्टका म्यानेजर शाहले अहिले दुईटा आउटलेट सुरु गरेर काम भइरहेको बताए । ‘हामीले २ सय जनालाई एकैचोटी सेवा दिन सक्ने अवस्था छ, हिमाल पहाड र तराईको खानलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौं,’ उनले भने ।